Sawirro: Turkiga oo markab mucaawino ah ku dejinaya Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
29th September 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Dowlada Turkiga ayaa dekeda Muqdisho kusoo xirtay markab weyn oo sida mucaawino loogu talagalay dadka Soomaaliyeed ee aabaruhu ku saameeyeen qeybo ka mid ah gobollada dalka.
Markabka oo haatan la dejinayo ayaa sida 10,000 metric ton (Toban Kun Metric Ton) oo ah raashin isugu jira Sokor, Bur iyo Baasto.
Mas’uuliyiintaas ka socday Bisha Cas ayaa warbaahinta u sheegay in raadhinkaas loogu talo galay dhamaan goballada dalka Soomaaliya.
Mustaf Yilmaz oo ah Madaxa wafdiga hay’adda Bisha Cas ee dalka Turkiga ee dalka soo gaarsiiyay kaalmada raashinka ah ayaa sheegay in deeqdan ay qeyb ka tahay qorshaha hay’addu ugu talagashay in ay wax ugu qabato bulshada Soomaaliyeed, isagoo xusay in tani ay ka turjumeyso xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga.
Mr Mustaf Yilmaz oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in shacabka Soomaaliyeed ay la garab taaganyihiin caawinta, maadaama mashaariicdii hore ee ay ka fulin jireen dalka ay ugu badneyd kuwa xagga dib u dhiska ah, iminka ay diyaar u yihiin inay kaalin ka qaataan samata bixinta dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Hay’adda Bisha Cas ee dalka Turkiga ayaa ka mid ah hay’adaha samafalka ee ka qeyb qaatay u gurmashada shacabka sanadkii 2011-ka xilligaasi oo ay dalka ka dhaceen macluul aad u daran oo galaafatay nolosha dad iyo duunyo.
Mucaawinadan ay keentay Bisha Cas ee Turkiga ayaa kusoo beegantay xilli dhawaan shirkad Turki ah la wareegtay dekedda Muqdisho, arrinkaas oo muran sharci iyo mid bulsho labadaba dhalisay.
Jawaari: Baarlamanku uma dulqaadanayo in madaxdu wareejiyaan hanti qaran